Ụgbọ elu dị omimi nke F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Ụgbọ elu dị omimi nke F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Aviation • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Agbanyeghị F-117 Nighthawk Stealth Fighter jet ka ejiri ụgbọelu F-22 Raptor dochie ya, ọ dị ka ọ ka na-arụ ọrụ, na-agbanwe dị ka ngwa agha ụgbọ mmiri. N'ezie, akụkọ banyere Nighthawk abụghị ihe omimi.
Emere okike Nighthawk na nzuzo na mbido 1975.
Akpa efe ya na 1981, mana e kpuchiri ya na nzuzo, ọha amaghị maka ụgbọ elu ahụ ruo afọ 7 ka e mesịrị.
Mgbe ekwuputara ezumike nka ya ebe ọ bụ na Raptor na -anọchi ya, ọ dị ka ụgbọ elu ahụ nọ na nchekwa mana n'otu oge anaghị arụ ọrụ n'ezie.
Lockheed Martin mepụtara Nighthawk dị ka ụgbọ elu ọgụ mgbe ọ rụchara ọrụ na teknụzụ stealth. Ihe okike nke onye bu ya ụzọ, ụgbọ elu ihe ngosi nnwale aha ya bụ Have Blue, rụrụ na nzuzo site na 1975.
Na 1978, F-117A batara na mmepe wee buru ụzọ fega ya na 1981. Mana ọha amaghị maka ịdị adị ya ruo mgbe ekwuputara ya afọ asaa mgbe e mesịrị na 7.
N'agbata 1982 na 1988, ewepụtara Nighthawk mbụ dị ka ụgbọ elu stealth mbụ na -arụ ọrụ na United States Air Force (USAF). Ọ ga -abụ otu n'ime ụgbọ elu iri isii na itoolu nke USAF ga -enweta site na 59, na -aka akara ikpeazụ ga -ebuga.
United States Air Force dochie F-117 na F-22 Raptor tupu akagbuo mmemme F-22 na 2009. Ejiri F-35 Joint Strike Fighter dochie ya dị ọnụ ala ma dịkwa ọtụtụ. Iri iri n'ime ụgbọ elu 55 F-117 nọ n'ọrụ lara ezumike nka na Disemba 2006. Ememe ezumike nka nkịtị mere na Wright-Patterson Air Force Base na Machị 2008.
Mana Nighthawks anaghị apụ. A na -echekwa ha na hangars n'ọdụ ụgbọ elu dị na Tonopah Test Range na Nevada. 4 Nighthawks ikpeazụ rutere n'Ule Nnwale na Eprel 22, 2008. Ewepụla nku na ọdụ maka nchekwa, mana enwere ike icheta ụfọdụ ụgbọ elu ngwa ngwa iji fega ma ọ bụrụ na achọrọ.
N’oge na-adịbeghị anya, ndị nche ikuku nke ikuku kwenyere na a na-eji F-117 Nighthawks na ọzụzụ ọzụzụ, gụnyere ije ozi dị ka ndị nnọchi anya mgbọ ogbunigwe na-abata. Ihe akaebe na -egosi na omume ọzụzụ a adịla nwa oge ugbu a. N'ihi na ụgbọ elu ahụ nwere ike ịme ihe dị ka mgbọ ogbugba ụgbọ mmiri, ha bụ ebe zuru oke maka mgbatị mgbọ ogbunigwe.
Ikekwe Nighthawk nwetara aha ya n'ihi na a na-eji ya naanị maka ọrụ abalị. Na nzuzo, obi abụọ adịghị ya, nyere akụkọ ihe mere eme ya na ọbụlagodi agba ojii, na -eme ka ọ dị mfe ịgwakọta na mbara igwe abalị. Mana onye kwesịrị ịgwakọta mgbe ị na -enweghị ike ịhụ ya na radar?
A na -akwalite elu na profaịlụ ihu nke Nighthawk iji gosipụta radar na -emegide n'ime akara mgbịrịgba dị warara, na -ewepụ ya na onye na -achọpụta radar onye iro. Ọnụ ụzọ niile na oghere mmeghe n'ụgbọ elu ahụ nwere ezé ezé n'ihu na akụkụ azụ nke na-egosipụta radar. Ejiri ihe radar na-etinye elu (RAM) kpuchie elu elu ụgbọ elu ahụ. Ihe a niile na -eme ka ọ bụrụ ihe a na -adịghị ahụ anya.
A makwaara dị ka Frisbee na Wobblin 'Goblin, ebumnuche nke F-117A Nighthawk bụ ka ọ banye n'ime oke iyi egwu wee wakpo ebumnuche dị oke ọnụ ahịa na ezigbo eziokwu. Nighthawk anọwo na -arụ ọrụ na Panama, n'oge Operation Desert Storm, na Kosovo, na Afghanistan, na n'oge Operation Iraq Freedom.
A na -eji aluminom nwere titanium arụ ụgbọ elu stealth a nke stealth maka mpaghara injin na iyuzucha.